Yakanakisa Chinyorwa Horizontal Inofinha Muchina Mugadziri uye Fekitori | Gadziridza
Aya akateedzana muchina une zvakanakira zvinotevera:
1) Mashini maturusi eakajairwa dhizaini imwe chete ikholamu, Kurutivi bhini, Yakagadziriswa Kutarisana Musoro. Worktable pamusoro Machine mubhedha njanji kuti longitudinal & crosswise kufamba, anogona Archive 360 ​​° muhombe kufamba. Kukanda mamiriro ane kuomarara zvakanaka
2) Chokurukisa rutsigiro nemapoinzi matatu, ziva chokurukisa kuomarara zvakanaka & kunyatsogadzikana yakatsiga yakanaka.
3) Mashini maturu main drive system ine imwechete kumhanya kwe7.5 kw AC mota mota, kuburikidza neiyo hydraulic yekutanga ina kusiana kumhanya rotary vharuvhu yekudzora humburumbira, kusimudzira mapoka mana ekutsvedza magiya uye kuzadzisa 8-1000r / min, 22 nhanho.
4) chokurukisa kumusoro uye pasi kufamba, inoshanda longitudinal & Crosswise kufamba inodzorwa Electromagnetic batira, Clamping kusunungura hydraulic kuzvidzora, Mushure clamping pamwe zvemaziso kuzvidzora nokukiya Clamping yakavimbika, kuderedza opareta basa kusimba, kunonatsiridza kushandisa michina kwemuchina maturusi.
5) Iyo yekukochekera ye chokurukisa kumusoro uye pasi kufamba, inoshanda longitudinal & Crosswise kufamba uye worktable muhombe kufamba kutora LingXingKuai clamping mashandiro, akachengeteka uye akavimbika otomatiki kutonga.
6) Inoshandisika 4 × 90 ° kutenderera kumisikidza, Nema optical tarisiro, yepamusoro yekumisikidza kururamisa Ita shuwa kuti kune yepamusoro switching inofinha kururamisa.
7) Bedway yemasiraidhi njanji adopts zvakazara akanyudzwa Stainless simbi bhodhi dziviriro, kuwedzera hupenyu hwehupenyu hwegwara njanji.
8) Bhokisi rekusimbisa remukati giya uye rinotakura lubrication mafuta pombi kubva kumuswe bhokisi 'giya pombi.
9) Izvo zvinofamba zvikamu zvemuchina zvine hunyanzvi hwemagetsi - hwemvura kupindirana hukama, chikamu chimwe chete chinofamba chinotenderwa kufamba, nepo zvimwe zvikamu zvinongoerekana zvamanikidzwa.
10) Machine chishandiso chemagetsi kudzora inotora PLC inogadzirisika mutungamiriri, yakavimbika mukuita.
11) Central lubrication inoshandiswa mune yepamusoro, inotsvedza chigaro, mukati petafura inotenderera uye mune ese magwara (kusanganisa iyo yekumashure mbiru), iyo inopihwa neyakawandisa lubricating pombi yakaiswa kuseri kwekutsvedza chigaro.
12) Chokurukisa taper ISO50 7:24 (Inesarudzo Yekuwedzera) ine otomatiki kurodha uye kudzikisa banga mudziyo haingopfupise nguva yekubatsira yekurodha uye kudzikisa mapanga, asi zvakare inoderedza kusimba kwevashandi kwevashandi. Iine basa re otomatiki kukochekera kwecheka uye hydraulic kusunungura, uye iko kuvhiya kuri nyore zvakanyanya, izvo zvinodzivirira kukuvara kwechakarukwa chaiyo kunokonzerwa neyakajairwa sando.
Iyo yemhando yepamusoro castings inogamuchirwa, iyo yekuomesa yekumusoro nzira yeinotungamira njanji inogamuchirwa mushure mekukuya, uye yakasimba mbabvu chimiro inogona kusangana nemutoro unokwanisa wemuchina unofinha.
Inogona kutsigira yakaturika kana ruoko mhando, kuitira kuti kuvhiya kuri nyore uye nekukurumidza; Iyo yepakati inodzorwa mashandiro epaneru iri nyore kushanda uye kupfupisa iyo inoshanda nzvimbo yeanoshanda.
Tafura kutenderera ine 4 × 90 ° Optical aiming uye yekumisikidza mudziyo, iyo inogona kusangana nemazvo zvinodikanwa zveakakura mabhokisi zvikamu kutendeuka.
Muchina unotora PROGRAMMABLE logic controller (PLC) kutonga, iyo yekumisa bhatani chiteshi chepakati kushanda.
Iyo yemhando yepamusoro castings inogamuchirwa, iyo yekumusoro yekudzima nzira yeinotungamira njanji inogamuchirwa mushure mekukuya, uye yakasimba mbabvu chimiro inogutswa zvakanaka nedivi rakarembera bhokisi chimiro chemuchina unofinha.
Yakagadzirwa yemhando yepamusoro simbi ndiro muforoma yekutenderera, yakarongedzwa dhizaini, yakasanganiswa kuumbwa, yakanaka uye ine rupo.
Iyo sisitimu inoumbwa neiyo hydraulic pombi, yekubatsira vharuvhu, yemagetsi inodzosera vharuvhu uye inoshanduka kumhanya rotary vharafu, uye iko kushanda kumanikidzwa kunogadziridzwa neruyamuro vharafu. Iyo huru yekufambisa uye yekudya inoonekwa ne rotary mavharuvhu.
Iyo huru yekumhanyisa yekumhanyisa shanduko kuburikidza nekutonga kweiyo inotenderera vharuvhu, kuitira kuti iyo yekumhanyisa yekumhanyisa silinda yakaiswa mukati meye chokurukisa bhokisi kusundira iyo inotsvedza giya munzvimbo dzakasiyana, kuwana akasiyana kumhanya.
Pashure: Horizontal Lathe CDE-A Series 52mm chokurukisa Bore
Zvadaro: CNC Horizontal Inofinha Muchina
TPX6113 / 2
BASA NO. 6
Kutarisana nemusoro wepakati
1100 * 960
1250 * 1100
1800 * 1600
Max mutoro unoshanda
W Akabatana Kufamba (chokurukisa kufamba)
U Akabatana Kufamba
B akabatana kutenderera angled
Chishandiso chekubata kumeso-ndiro
Chokurukisa Taper –ISO50 7:24
Iyo refu yekubata
Dhijitari inoverengwa-3 Akisi (XYZ)
Nhungamiro chengetedza mudziyo weMubhedha, Chigaro cheZasi
Pfupi yekudzora ruoko
Horizontal Uye Vertical Boring Machine
Horizontal Boring Midziyo
Horizontal Dowel Inotinha Muchina
Inotakurika Horizontal Inofinha Muchina